प्रदेशसभा सदस्य ओलीको नि’धनपछि काँग्रेसमा अन्तरघा’तकै डर ! – Nepal Online Khabar
फागुण २२, २०७८ आइतबार 194
काठमाडौं : २०७४ मा दाङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शून्यमा झरेको काँग्रेस ६ प्रदेशसभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र विजयी भयो।
प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको नि’धनपछि भएको उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले आफ्नो पूरै शक्ति खर्चियो । तर उसले आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न सकेन । काँग्रेसले उपनिर्वाचनमा पनि हार बेहोर्यो।
यी हारको कारण काँग्रेसले भन्यो ‘पार्टीभित्रकै अन्तरघात।’ त्यसो त जितमा पनि काँग्रेसले पार्टीभित्र अन्तरघा’त भएको भनेर नकार्न सक्दैन। फलत जिल्लामा भएका निर्वाचनको जुनसुकै परिणामलाई काँग्रेसले पार्टीको अन्तरघा’तसँग जोडेर विश्लेषण गर्दै आएको छ। हार वा जित दुवैमा अन्तरघा’त जोड्ने गरेको काँग्रेसको बुझाइ छ, ‘अन्तरघात हारको प्रमुख कारण हो, अनि जित पनि अन्तरघा’त हुँदाहुँदै भएको हो।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा माओवादी एकछत्र वि’जयी हुनुको प्रमुख कारण काँग्रेसले आफूभित्रको अन्तरघातलाई अर्थ्यायो। पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताको चरम अन्तरघातका कारण पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोरेको विश्लेषण गरेका काँग्रेसीजनले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा अन्तरघात हुँदाहुँदै जित निकालेको विश्लेषण गरे ।
स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसँगै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको हारलाई पनि काँग्रेसले पार्टीभित्रकै अन्तरघा’तसँग जोडेर हेन्यो । प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा पनि हारको कारण अन्तरघा’त नै भएको निष्कर्ष उसले निकाल्यो।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अन्तरघा’त दोहिरन सक्ने भयले काँग्रेस नेता र कार्यकर्ता चिन्तित हुन थालेका छन् । उसले सांगठनिक क’मजोरीलाई हारको कारण मान्दैन ।-याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevम्यादी प्रहरीलाई २४ हजार तलब, पोसाक र खाजा खर्च पाउने !
Nextरुस र युक्रेनबीच अर्काे शान्तिवार्ता भोलि हुँदै !